Kubafundi Abadala Ukufumana i-GED yakho
Ingcaciso oyifunayo ukuphinda i-credential GED yakho e-Ohio.
I-GED (uQeqesho oluPhezulu loPhuhliso lwezeMfundo) kwilizwe lase-Ohio liphathwa liSebe leMfundo lase-Ohio. Urhulumente uyaqhubeka nokusebenzisana kwawo kunye ne-GED Testing Service kwaye, ngoJanuwari 1, 2014, unikeza uvavanyo olutsha lwe-GED olutsha lwe-2014.
Isayithi le-Ohio GED lilula kakhulu ukusebenzisa kwaye linika uninzi ulwazi oluncedo, kubandakanywa nemihla xa ulwazi luhlaziywa, ngoko uyazi oko ufundayo ngoku.
Ukuqakraza kwiinkcukacha zokuhamba ngokubhekiselele kwicala lasekhohlo lephepha kuza kukunika ulwazi malunga namaziko okuqhuba i-GED kummandla welizwe, ukuvavanya iimvavanyo, izikhokelo zokuseka i-akhawunti kwiNkonzo yokuVavanya kwe-GED, iifom eziyimfuneko kunye neluhlu olude lwemibuzo efunwa rhoqo. .
Kwakhona kwinqanaba lokungena kwekhohlo, uya kufumana ulwazi malunga ne-Ohio Diploma ye-Adult Diploma, inkqubo yoqeqesho lomsebenzi enceda abafundi abadala ukuba balungiselele imisebenzi emfuno e-Ohio. Esikhundleni sokugxila kwiiyure kunye namabakala, le nkqubo isekelwe kwikhono lokwenza iifomati ezenzayo. Emva kokuba ufunde isethi yobungcali kwaye ungabonisa ubunzima bekhono ngalinye elifunekayo, unikwe umniki-nkonzo okunceda ukuba wenze isicwangciso sempumelelo somfundi esifanelekileyo . Kukho izikolo ezintlanu zokuqhubela phambili ezibandakanyekayo kule nkqubo:
College College Community Community
I-Pickaway-Ross eSikolweni soBuchule
I-Miami Valley Career Technical
Iziko, iCowhoga Community College
I-Penta Career Centre
Abafundi banokukhetha ukufunda imisebenzi emilandelayo: ochwepheshe beenkonzo zokuhamba ngeemoto kunye nabacwangcisi bamabhasi, abaqhubi bamabhasi, abaphathi beekhompyuter kunye neenkcukacha, abancedisi bamazinyo, oombane, oogqirha bezonyango, kunye nabagadi beemviwo, abaphathi bezemali, abaphathi abaqhelekileyo kunye nabaphathi bemisebenzi, abasebenzi bezempilo, iilori zorhwebo kunye abaqhubi beetrakta, abahlaziyi bezokukhusela ulwazi, iilori ezikhanyayo okanye abaqhubi beenkonzo, abahlengikazi, abaxhasi bezonyango, abaphathi bee-ofisi, abagadi bezemfundo nabancedisi bomthetho, abaphathi bezentengiso, abasebenzi bezentlalo, abafakeli kunye nabachazi.
Zininzi izigqibo ezintle!
I-Ohio nayo inikezela inkqubo eyongezelelweyo yabafundi abadala ababizwa ngokuba yi-Programme Diploma ye-Adult High School Diploma. Le nkqubo yenzelwe abantu abadala abadala abaneminyaka engama-22 ubudala, okanye abadala, abafuna ukuqhubeka nomsebenzi kwintsimi engabandakanywa kwiNkqubo yeDiploma yabalulwe apha ngasentla. Abacebisi basebenzisana nabafundi ukuba bancede baqaphele imisebenzi abayifunayo, iikhosi abayidingayo, kunye neemvavanyo abaza kuyidinga ukuthatha. Le nkqubo iyafumaneka kwi:
I-Cleveland Academy ye-Technology Stuckship kunye neNkokheli
Isikolo samabanga aphakamileyo seDohn
Isiko soBomi beZakhono zoSuku
Isikolo soLuntu sasePolly Fox Academy
I-Quaker Digital Academy (inthanethi)
ISikole saseKapa saseKapa
Iinkcukacha zoqhagamshelwano kwindawo nganye zifumaneka kwiiprogram zephepha. Cofa kwibhokisi elimnyama kwikhoneni elingenene lePD ngefayili ngolwazi olupheleleyo malunga nale program, kubandakanywa nendlela yokubukela i-webinar ngolwazi olongezelelweyo malunga nokusetyenziswa.
I-Ohio imisela imisebenzi
Ukusuka kwi-Ohio Options kwi Diploma yabadala kunye neGED iphepha, unokufikelela kuyo yonke into ofuna ukuyifumana ngayo ukhetho olukhethile. Inomdla okhethekileyo yikhonkco phantsi kwe-Diploma yabantu abadala efunda: I-Ohio isebenzisa Imisebenzi.
Ukuchofoza kwikhonkco kukuthabatha kwiphepha elitsha apho, ukuba ukhetha Umntu ngamnye, unokucacisa ukuba ungumdala, umvuzo wokungabikho kwemisebenzi, umxhasi weenkonzo zentsapho, umntu onokukhubazeka, okanye umfundi wekholeji, kwaye Unokufuna imisebenzi ehambelana necandelo lakho. Iziqhagamshelwano kwiphepha likhokelela ekuncedeni kwamanqaku amaninzi, kuquka ulwazi malunga nokufunda kwi-intanethi kunye ne- calculator yebhajethi .
Buyela kuluhlu lwelizwe.
Indlela yokufunda kwi-GED / i-Diploma yesikolo esiphakamileyo se-Diploma ekhaya
Indlela yokufumana imfundo yabadala kunye nokufumana iGED eMichigan
Indlela yokufumana iirekhodi zakho zeGED
I-GED kunye neNkqubo ePhakamileyo yeeNkqubo ezifanayo kwi-US
Uvavanyo lwe-GED olusekhompyutheni - malunga noTshintsho kunye noluphi uvavanyo
Indlela Yokugwema Ukukhwabanisa kwaye Khetha Iikholeji ze-GED kwi-Internet
I-GED yamahhala yokuSebenza kwee-GED
Amanyathelo okuqala ekufumaneni i-GED yakho
I-GED UkuBonisana noLwazi lweeLwimi zoVavanyo (RLA)
Fumana i-GED ne-High School Equivalence Programs e-US, Uludwe lwe-5
Iidemon ezithintekayo ezifumana i-GED
Umdlalo ophuculweyo: Abagadi bamangalisa
Yayiyini I Khmer Rouge?
Funda indlela yokudweba iRose kwiPencil Colors
Imilinganiselo yokuziphatha kunye neNtlalontle yomtshato wamaGay
20 Iingongoma malunga noMama
Igama elithi Definition and Examples
Ukutyelela iZiko leMbali leNtsapho
Biography kaGirolamo Savonarola
Iingqungquthela Iingcebiso - Ngaba kunye neNkokeli zeCigar Connoisseurs
Indlela yokuMaka ibhola leGolf kwi-Putting Green
Yintoni "Imveliso" Ethetha Ngomxholo Wezoqoqosho?
2014 Iifilimu Iintsapho Zonke Ziyakuthanda
Iifayile zokuSebenzisa ezimbini-Digit ngaphandle kokuhlanganisa
IiVerbs zesiLatini ezingabonakaliyo
Donald Trump Iikhathuni
I-10 Enamandla kwi-Blogs kwi-Intanethi
Iprofayile yePower Pirate engaziwayo, uMary Read
Iimvuno zeThutho zeZithuthi
Ngaphambi kokuba uthenge iiTyhuse zeeBhayisi
Yintoni Umfazi Omele Ayenxibe kwiKholeji?
Iprofayili yeAria "uNessun Dorma"